Boston Collegiate Charter School (Xarunta Hoose) | Boston School Finder
Charter (qaniga ah)5aad - 6aad
Heer Gobal: Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 8:00am-3:10pm
Lambarka Taleefanka 617-282-6710
Boston Collegiate Charter School (BCCS) waa dugsi agu dhigto fasalada shanaad-12aad oo charter ah ardaydana loogu diyaarsho kuleejka. Dugsi waa dookha dugsiyada dawlada ee aan doorashada lahayn ee ugu waxbarashada fiican oo kuyaala Boston sida kucad natiijooyinka Meelaynta Dheeriga ah waxayna kuqiyaastay laanta Wararka Maraynkanka iyo Warbixinada Aduunku dugsiga sare ee ugu fiican oo charter ah kuna yaala Boston. BCCS wuxuu diirada saaraa waxbarasho heer sare ah, asagoo raacaaya mabaadii'ada aasaasiga ah oo ah in hadaysan jirin macalimiin tayo leh, inaan wax kale macno samaynayn. Masraxa dugsiga ayaa ah iskudhafnaanta ardaydiisa: ardayda ayaa kasoo kalajeeda dhamaan dafaha magaalada Boston ayadoo iskudhafnaanta dugsiga ee dhinacyada isisrka, qoomiyaa, iyo heerarka dhaqan dhaqaale ee ardaydu ay muujinayaan iskudhafnaanta bulshada magaaladeena. Waaan kudadaalaynaa inaan ahaano dugsi taageero siiya dhamaan ardayda aana noqono mel arday kasta laga yaqaano si qoto dher. Waxaan diyaarinaa safaro dalxiis gaaban ah si aan kor ugu qaadno iskuxirnaanta ardayda biloowga sanadka iyo si aan uhormarino barnaamijyada dugsigeena sanadka oo dhan. Waxaan sidoo kale qabanaa munaasabadaha bulshada sida ciyaaraha qoob kaciyaarka, maalmaha labiska, quraacaha qadarinta ah iyo munaasabadaha kale ee dhaqanka lagu xoojinaayo. Ardayda ayaa adeesada Laptop-yo markay ubaahdaan. Waxaan leenahay qaabab kaladuwan oo qoysasku kuala xariiri karaan waxna ugu biirin karaan dugsiga. Waxaan leenahay Kooxda Talo Bixinta Qoysaska iskudhafan, Kooxda Talobixinta Taageerada Ardayda ee Qoyska iyo Ururka Qoysaska.
Yoolka Boston Collegiate Charter School waxaa weeye in ay arday walba u diyaariso kulliyada. Waxaan bixina manhajka diyaarinta kulliyada waxbarasho ahaan adag ee ardayda ku jiro fasalada shan ilaa labo iyo toban. 100% ee ardaydeena qalinjabineyso waxaa laga ogolaaday kulliyada; intooda badan waxay ahaanayaan kuwa ugu horeeyo qoysaskooda si ay u buuxiyaan digriiga kulliyada.
Waxaan bixina manhajka kulliyada oo waxbarasho ahaan adag si aan u hubino in ardaydeena ay u diyaarsanyihiin kulliyada. Waxaan macalimiinta siinaa fursad ay kunaqshadeeyaan manhaj macno badan uleh ardayda ilaa ntay kahaystaan buundo aqooneed oo heer sare ah sida kucad heerarka gobalkeena udagsan iyo MCAS. Maadaama aan dirada saarayno udiyaarinta ardayda kuleej, waxaan leenahay nidaamka labo jibaarka ee Farshaxanka Luuqada Ingiriiska iyo Xisaabaadka oo loagu dhgo fasalada shanaad ilaa sideedaad. Dugsigeena sare, ardaydeenu waxay dhigtaan afar sano oo labaro afar maado oo waxbarashada aasaasi u ah iyo sadex sano oo ay luuqada bartaan. Waxaan samaynaa sideed imtaxaan oo kuwa Meelaynta Dheeriga ah waxaan sidoo kale bixinaa siminaaro ikhtiyaari ah oo lasiiyo ardayda fasalada sare ee capstone. Waxaan bixinaa farshaxanada muuqaalka ah oon kudhigno fasalada shanaad-12. Waxaan sidoo kale bixinaa barnaamijka Xirfadaha Kuleejka kuwaasoo diirada lagu saaro aqoonta, xirfadaha, iyo hal abuurka kuwaasoo ay ardaydu ugu baahanyahay si ay ugu diyaar garoobaan kuleejka, kuwaasoo iskugu jira sida loodhiso hanaan xirfadeed oo soojiidasho leh ilaa waxa ay flan karaan marka koobaad ee ay soogalayaan xarunta kuleejka.
Quraaac ayaa labaxshaa 7:00am, fasalka subixii 8:00-5:00pm saacadaha xafiiska
3:00 - 5:00pm, fiiri hawlaha kabaxsan manhajka ee labixiyo. Inkastoo xiliga ardayda aan maalintii fasaxno uuyahay 3:10 pm, waxaan leenahay bas soodaaha kaasoo ardayda gurga uqaada markay saacadu tahay 5:00 pm dhawr maalmood asbuucii.
Shaar leh astaanta dugsiga iyo dabo gaab kaaki ah.
Waxaan ubalan qaadaynaa boos inay helaan dhamaan ardayda dhigta Boston Collegiate Upper Campus (kaasoo lagu dhigto fasalada 7aad - 12aad).
Waxbarashada gaarka ah: waxay u adeegtaa dhamaan ardayda dugsiga lagu keenay hanaanka bakhtiyaa nasiibka ah iyo hanaanka diiwaangalinta qaaska ah; adeegyada xanuunka Autism-ka; Adeegyada dadka naafada ka ah dareenka; Adeegyada ardayda naafada ka ah caqliga ee dhexdhexaadka ah; Adeegyada naafonimada caqliga ee yar; Adeegyada dadka naafonimada badan qaba; Adeegyada ardayda jirka naafada ka ah; Adeegyada naafada dareenka (maqalka); Adeegyada Naafada Dareenka (araga); Adeegyada naafada gaarka ah ee waxbarashada; Fasalo iskudhafan; Adeegyo aasaasiyan qaas ah. Waxaan taageero kabixinaa labada xarumood ee dugsiga markii baahi looqabo taageero.
50 oo kamid ah70
Waxaan bixinaa barnaamij dugsiga kadib ah kaasoo leh maadooyin ikhtiyaari ah oo dhanka farshaxanka, ciyaaraha guud iyo wargayska dugsiga ah. Sanad kasta waxaan abuurnaa maadooyin cusub ayadoo laga raacaayo xirfadaha iyo hibada ardaydeena.
Waxaan bixinaa barnaamijka ciyaaraha guud, laaiin ciyaaraha lagu tartamo ee udhaxeeya kuleejyada ayaa kabiloowda fasalka 7aad ee dugsigeena.